Pepephone နှုန်းထားများနှင့် မိုဘိုင်းအားပြန်သွင်းခြင်း။
Pepephone သည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော မိုဘိုင်းလ်ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒါက ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာတစ်ခုပါ။ နိုဝင်ဘာလ 2007 တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ 4G နည်းပညာဖြင့် စပိန်ရှိ MásMóvil အုပ်စုမှ ပိုင်ဆိုင်သည်။
၎င်းသည် ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများအတွင်း အင်တာနက်ပက်ကေ့ချ်များနှင့် မိုဘိုင်းနှုန်းထားများကို ပေးဆောင်သည်။ ကောင်းသောစျေးနှုန်းနှင့် Pepephone လိုင်းကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ သင်မစားသုံးသော megas ကိုသင်စုဆောင်းနိုင်သည်။ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် နှစ်ခြိုက်သော တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤကုမ္ပဏီသည် အရည်အသွေးမြင့် ဝန်ဆောင်မှု၊ တည်မြဲခြင်းမရှိသော နှုန်းများဖြင့် သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ မှတ်ပုံတင်ရန် သို့မဟုတ် တပ်ဆင်မှုအတွက် မည်သည့်အရာမှ ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ ထို့အပြင်၊ သင့်မိုဘိုင်းမှ ထိန်းချုပ်နိုင်စေရန် iOS နှင့် Android သုံးစွဲသူများအတွက် အက်ပ်တစ်ခုရှိသည်။
သုံးစွဲသူ၏သစ္စာစောင့်သိမှုကိုလည်း ဆုချနိုင်သည်။ ပုံမှန်လျှော့စျေးများဤအရာနှင့် ၎င်း၏ဖောက်သည်များ၏ ကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံမှုသည် Pepephone ကို ဖော်ပြသည့် အကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဖောက်သည်တစ်ဦးဖြစ်လိုပါက ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကို ဤနေရာတွင် ရှင်းပြပါမည်။
Pepephone တွင် ကြိုတင်ငွေပေးဖုန်းဝန်ဆောင်မှုများ ရှိသော်လည်း၊ လက်ရှိတွင် ကုမ္ပဏီသည် အဆိုပါနှုန်းထားမျိုးများကို မပေးတော့ပါ။ထို့ကြောင့် သင်သည် ၎င်းကို မည်သည့်အတွက်မဆို စာရင်းသွင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ သို့သော် သင်သည် ကြိုတင်ငွေပေးချေသော သုံးစွဲသူဖြစ်နေပြီဆိုလျှင်၊ တူညီသောနှုန်းထားကို ထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်သောကြောင့် စိတ်မပူပါနှင့်။
သို့သော်သင်ပြောင်းလဲလိုပါက Pepephone သည်သင့်အားအခြားရွေးချယ်စရာကိုပေးသည်။ စာချုပ်ကြေးကြိုတင်ငွေပေးချေမှုနှုန်းထားများနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ကွာခြားချက်ကို သတိမထားမိဘဲ သင့်မိုဘိုင်းမှ စကားပြောကာ သွားလာနိုင်သည့် အရည်အသွေးရှိသော ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု သင့်အား အာမခံပါသည်။
ဝန်ဆောင်မှုများကို ပြောင်းလဲရန် Pepephone ကို ဆက်သွယ်ပါ။ ဖုန်းဖြင့် သို့မဟုတ် သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်မှတဆင့်ခေါ်ဆိုပါ။. သင်အလိုရှိသော စာချုပ်နှုန်းကို ရွေးချယ်ပြီး ၎င်းတို့သည် သင့် SIM ကတ်အသစ်ကို သင့်ထံ ပေးပို့မည်ဖြစ်ရာ အော်ပရေတာမှ သင့်အား လမ်းကြောင်းပြခြင်းနှင့် ခေါ်ဆိုမှုများတွင် ပေးဆောင်သည့် အကျိုးကျေးဇူးအားလုံးကို စတင်ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Pepephone တွင် သင့်လိုအပ်ချက်နှင့် အကိုက်ညီဆုံးကို ရွေးချယ်နိုင်စေရန် စာချုပ်နှုန်းထားများစွာရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် သင်၏ဆက်သွယ်ရေးကို တိုးတက်စေမည့် ပေါင်းစပ်မှုများကို တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ စာချုပ်ပါနှုန်းထားများဖြင့် သင့်ကုန်ကျစရိတ်များကို ပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။.
သင့်တွင် စကားပြောဆိုရန် ငှားရမ်းရန် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည် သို့မဟုတ် သင်ပိုမိုပြီးပြည့်စုံသော အရာတစ်ခုကို လိုချင်ပါက ၎င်းတို့က သင့်အား ကမ်းလှမ်းသည်။ ခိုးယူနိုင်သောနှုန်း ထို့ကြောင့် သင်သည် အတည်တကျမရှိဘဲ စျေးသက်သက်သာသာဖြင့် လှိုင်းစီးပြီး စကားပြောနိုင်သည်။ သင့်တွင်ရရှိနိုင်သည်။ ထုံးစံ ၎င်းသည် သင့်အား 4GB နှင့် 7GB စုစည်းမှုကို ပေးစွမ်းပြီး အမြဲတမ်း သွားလာရန် မလိုအပ်ပါ။
ဤနှုန်းထားက သင့်ကို ပေးဆောင်သည်။ တစ်လလျှင် 25 GB သင်၏ဒေတာကုန်သွားပါက နောက်လအတွက် ကြွင်းကျန်မှုများကို စုဆောင်းခြင်း၏ အားသာချက်မှာ အပိုကုန်ကျစရိတ်မရှိဘဲ မြန်နှုန်းနိမ့်ဖြင့် ရှာဖွေနိုင်သည်။ သင့်တွင် နိုင်ငံအလိုက် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများနှင့် ကြိုးဖုန်းများသို့ အကန့်အသတ်မရှိ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများအပြင် နိုင်ငံအလိုက် မိုဘိုင်းလ်များသို့ စာသားမက်ဆေ့ချ်များ ပါဝင်သည်။
စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်၊ ထည့်သွင်းပါ။ Pepephone ဝဘ်ဆိုဒ် ပြီးလျှင် "ငါသူ့ကိုချစ်တယ်” ထို့နောက်၊ ရွေးချယ်စရာ3ခုထဲမှ တစ်ခုကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် သင်သည် နံပါတ်အသစ်တစ်ခုကို လိုချင်ပါက၊ သင်၏ ကြိုတင်ငွေဖြည့်နံပါတ်ကို Pepephone သို့ ယူဆောင်လာပါ သို့မဟုတ် သင်၏ စာချုပ်နံပါတ်ကို Pepephone သို့ ယူဆောင်လာပါ။
နံပါတ်အသစ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါက၊ သင်အလိုချင်ဆုံးနံပါတ်ကို ရွေးချယ်ရန်အတွက် ရွေးချယ်စရာများစွာ ပေါ်လာပါမည်။ ထို့နောက် သင်၏ ပို့ဆောင်မှုကို စောင့်ရန်သာ လိုသည်။ universal sim ကတ်သင့်မိုဘိုင်းနှင့် အလွယ်တကူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြင့် ပါရှိသည်။ အခုနှိပ်"ဆက်လက်"။
ထို့နောက် သင်၏ အီးမေးလ်နှင့် စကားဝှက်ကို ဖြည့်ပါ၊ဆက်လက်"တောင်းဆိုထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ အချက်အလက်များနှင့် သင်၏တောင်းဆိုချက်ကို ဖြည့်ပါ။ အပြီးသတ်ရန်၊ ပို့ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ငွေပေးချေမှုတို့သာ ရှိပါမည်။
စိတ်ကြိုက်နှုန်းဖြင့်4GB သို့မဟုတ်7GB အကြားရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင့်မိုဘိုင်းမှ လမ်းညွှန်နိုင်စေရန်နှင့် စကားပြောနိုင်စေရန်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် ရွေးချယ်ထားသော GB နှင့် စကားပြောရန်အတွက် သင်ပေးချေသည့်အရာကြားတွင် သင်အလိုရှိသော ပေါင်းစပ်မှုကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင်ရွေးချယ်မှုအရ၊ စျေးနှုန်းသည် ကွဲပြားလိမ့်မည်။ ရွေးချယ်စရာများထဲမှ "" ကိုနှိပ်ပါ။ငါသူ့ကိုချစ်တယ်"စာရင်းသွင်းရန် အချက်အလက်အားလုံးကို ဖြည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
သင်၏ Inimitable သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်နှုန်းဖြင့် သင့်တွင် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။ စကားပြောပြီး surf လုပ်ပါ။ သို့မဟုတ်သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ စကားပြောရုံပါပဲ။. မိုဘိုင်းဖုန်းမှ ကြိုးဖုန်းများသို့ 1.001 မိနစ် စကားပြောကြားခြင်းနှင့် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ မိုဘိုင်းဖုန်းများသို့ တစ်လလျှင်9ယူရိုသာ (သို့) သင်ပြောသောစကားအတွက်သာ အခကြေးငွေမယူဘဲ နှုန်းထားကို ရွေးချယ်ပါ။ "ကိုနှိပ်ပါငါသူ့ကိုချစ်တယ်“တောင်းဆိုထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဖြည့်ပါ။
သင်၏ Pepephone နှုန်းထားများကို ငွေဖြည့်ပါ။
သင်၏ Pepephone နှုန်းထားများ၊ စာချုပ်ပါ ဘောနပ်စ်များကို ပြန်လည်အားဖြည့်ရန်၊ GB ကိုထည့်ကာ သင့်အကောင့်ကို စီမံခန့်ခွဲရန်၊ ၎င်းကို သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည် ကျွန်ုပ်၏ PEPEPHONE သင့်အီးမေးလ်နှင့် စကားဝှက်ဖြင့် ဝင်ရောက်ပါ။ "အကောင့်ဝင်ရန်"
Pepephone အက်ပ်ကို သင့်မိုဘိုင်းတွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သည်။ မင်းဆီက ဝင်လာတာ။ ဒီမှာ အကူအညီကဏ္ဍတွင် ၎င်းဖော်ပြထားသည့်နေရာကို နှိပ်ပါ။ "အက်ပလီကေးရှင်း" ။
Android စက်များအတွက် အက်ပ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ Google Play စ သင့်စက်သည် IOS ဖြစ်ပါက အက်ပ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ Apple ကပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်. သင့်မိုဘိုင်းတွင်ထည့်သွင်းခြင်းပြီးသည်နှင့်၊ ဝင်ရောက်ရန်၊ သင်၏ Pepephone မှတ်ပုံတင်ခြင်းတွင် သတ်မှတ်ထားသော သင်၏အီးမေးလ်နှင့် စကားဝှက်ကို ထည့်သွင်းရပါမည်။
သင်၏ဘဏ်ခရက်ဒစ် သို့မဟုတ် ဒက်ဘစ်ကတ်များကို အသုံးပြုပါ။ သင်၏ငွေပေးချေမှုများကို အဆင်ပြေစေရန်အတွက်၊ သင်သည် သင်၏ Bankia အကောင့်သို့ အပ်ငွေ သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းနိုင်သည်- ES46 2038 0969 4160 0005 1676 လိုင်းပိုင်ဆိုင်သူ၏ ID သဘောတရားကို ညွှန်ပြထားသည်။
ဖုန်းငွေဖြည့်ပါ » ကုမ္ပဏီများ » Pepephone မိုဘိုင်းကို အားပြန်သွင်းပါ။